महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा मैले जे देखेँ | Chhinchhin Khabar
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा मैले जे देखेँ
१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:१६
नेपालगन्ज-महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मध्य तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रकै चर्चित, प्रतिष्ठित उच्च शिक्षाको लागी शैक्षिक हव हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंजमा अवस्थित छ । २०१२ सालमा पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्थापना भएको नारायण डिग्री कलेज २०१८ सालमा महेन्द्र डिग्री कलेजको नाममा रुपान्तरण भएको थियो । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागु भएपछी महेन्द्र डिग्री कलेजको नाम परिवर्तन गरी महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस राखिएको हो । २०६० भन्दा अघि ए गे्रड पाएको क्याम्पस हाल बि गे्रडमा झरेको छ । अझै यसको गुणस्तर खस्किदो अवस्थामा छ ।
कुरा यही मंसिर महिनाको पहिलो सातातिरको हो । म काम विशेषले क्याम्पस गएको थिएँ । त्यहाँको स्थिती देख्दा मनमा अनेकौं प्रश्न उब्जे । क्याम्पसको क्षेत्रफल पर्याप्त देखिन्छ, तर अब्यवस्थित छ । क्याम्पस हाता भित्रको घाँस र रुख काटछाँट गरिएको छैन । क्याम्पसका भवनहरु फोहोरले भरिएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ खाएर कक्षा कोठाको भित्ता र कुनामा थुकेका छन् । शौचालयमा गई नसक्नु फोहोर छ, मर्मत सम्भार, सरसफाई र पानीको उचित व्यवस्था छैन । कक्षा कोठा तथा कार्यालयका सिलिङ तथा झ्यालमा माकुराले जालो लगाएको छ । प्राध्यापकको आउने जाने कुनै निश्चितता छैन । बिद्यार्थी संख्या पहिलेको तुलनामा निकै न्युन छ र भएका बिद्यार्थीहरु पनि नियमित छैनन् । कक्षामा शिक्षण नियमित छैन । पुस्तकालय छ, तर अस्तव्यस्त ।
किताब छन्, तर पुराना । हजारौं किताब पुस्तकालयमा छन्, तर त्यसको उचित व्यवस्थापन छैन । जमाना आधुनिक भईसक्यो तर, क्याम्पसमा कुनै आधुनिकरण भएको छैन । कक्षामा मल्टिमिडिया त परको कुरा लेखामा समेत कम्प्यूटर सिष्टम छैन । बिद्यार्थी र शिक्षकका साईकल तथा मोटर साईकल पार्र्किङको कुनै ठाउँ निश्चित छैन । यति हुँदा हुँदै यसको सही व्यवस्थापन कस्ले गर्ने ? कहिले व्यवस्थापन गर्ने ? क्याम्पस व्यवस्थापनले के हेरिराखेको छ ? विभिन्न राजनीतिक दलका बिद्यार्थी भातृ संगठनले के हेरी राखेका छन् ? हरेक बिद्यार्थीले उचित गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार छ, खै अधिकारवादी ? शिक्षा क्षत्रमा कलम चलाउने पत्रकार कहाँ छन् ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के हेरेर बसेको छ ? शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन कहिले गर्छ ? के क्याम्पस यस्तै हुन्छ ? जवाफ चहियो । क्याम्पसको व्यवस्थापनमा चाँडै सुधार आवास र हरेक बिद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँन् ।
Previous articleघरदैलोको अन्तिम चरणमा आक्रामक प्रचार
Next articleमाओवादी आक्रमणमा परी घाइते परिवारलाई गाउँ फर्किन डर
विदेशिएका नेपालीको सरकार खोइ
‘न्याय हेरेस्, मान नहेरेस्’
‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सरकारका एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्’
‘उच्च मनोबल, सतर्कता र सकारात्मक सोच नै कोरोनाको उपचार’
अथकको अथक प्रयासले बाँकेको नरैनापुरमा २६ वर्षपछि बत्ती
सपनामा देखेको अनौठो देशको भ्रमण
नेपालको नक्सा सम्बन्धमा…
लिपियाधुरा, लिपुलेखमा भारतद्वारा भूमि अतिक्रमणः कालापानीको भारतीय क्याम्प नहटाउनु दुर्भाग्य
‘स्वास्थ्यकर्मीको निर्देशन पालना गरे कोरोनालाई सहजै परारस्त गर्न सकिन्छ’
‘कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै कोरोनाविरुद्ध अघि बढ्न आवश्यक’
किन लुकाइन्छ कोरोना संक्रमितको परिचय ?
घटनाको आठ दिनपछि अधिकारकर्मी मटेहियाको अनुगमनमा
नरैनापुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा
कालोबजारीविरुद्ध अदालतमा रिट दायर